आमाको खोप (कथा) - Action Khabar - Nepali Online News Portal
आमाको खोप (कथा)
सधैँको जस्तै बेलुकाको खाना खाएपछि फेसबुक खोलेर हेर्दै थिएँ, वडा कार्यालयले पैँसट्ठीदेखि सत्तरी वर्षसम्मको उमेर समूहलाई लक्ष्यित गरी कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सूचना राखेको रहेछ । मेरो वडाका वडाध्यक्ष मसँग फेसबुकमा साथी थिए । सूचना तिनै वडाध्यक्ष्यमार्फत प्रवाहित थियो । राज्यले यसभन्दा पहिल्यै स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सत्तरी वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाहरूलाई खोपको व्यवस्थापन गरिसकेको थियो र यसपटक भने पैँसट्ठीदेखि सत्तरी वर्षसम्मको उमेर समूहलाई लक्ष्य बनाएको थियो ।
उल्लिखित उमेर समूहमा मेरी आमा पर्नुहुन्थ्यो । मेरो परिवारमा लक्ष्यित समूहअन्तर्गत आमालाई खोप लगाउन पाइने भयो । वडाध्यक्षले समयमै जानकारी दिएकोमा खुसी लाग्यो । खोप लगाउनका लागि भोलि र पर्सि गरी दुई दिनको समय रहेछ । जनप्रतिनिधिले सूचना प्रवाहित गरेर आफ्नो वडावासीहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याएकामा वडाध्यक्ष लगायत अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई पनि मनमनै धन्यवाद दिएँ र आमालाई भोलि नै खोप केन्द्रमा लगेर खोपाउने सोच बनाएँ ।
मेरी आमा गाउँमै बस्नु भएको थियो । पछिल्लो समय बुबा बितेपछि गाउँमा एक्लै बस्ने अवस्था रहेन । उमेर अवस्थाले पनि अशक्त बनाउँदै गएपछि उहाँ सहरमा आएर हामीसँगै बस्न थाल्नु भएको थियो । आमा यहाँ आएर हामीसँग बस्न थालेको लगभग पाँच वर्ष जति भएको थियो ।
आमा उनन्सत्तरी वर्षकी हुनुभएको थियो । कोरोना समुदाय स्तरमा व्यापक रूपमा फैलँदै गएको थियो । सङ्क्रमणको समय, हामी बढी नै सजग थियौँ । निकै होसियारीपूर्वक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर काममा निस्कन्थ्यौँ र काम गर्थ्यौं । तर आमाले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर काम गर्न त्यति दोहोर्नुहुँदैनथ्यो । यसबाट भने हामी अलि बढी नै चिन्तित थियौँ । परिवारमा एक जनालाई मात्र लक्षण देखिए पनि अन्य सदस्यलाई समेत सर्ने सम्भावना बढी भएकाले हामी चिन्तित हुनुपरेको थियो ।
आमाले यहाँ पनि गाउँमा रहँदा जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो । सहरमा आएर यतिका समय बसिसकेपछि पनि गाउँमा अभ्यस्त बानीव्यवहारलाई च्वाट्टै छोड्न सक्नुभएको थिएन । गाउँमा रहँदा वल्लो घर, पल्लो घर, छरछिमेक जताततै डुलिरहने मान्छे; मेलापात, दाउराघाँस जता पनि हुलै बाँधेर हिँड्ने चलन । अझ दिनभरिको कामबाट बेलुका घर फर्केपछि पनि खाना खाइवरी जुठोभाँडो सकेर निद्रा नपरुन्जेलको समय गफै लडाएर बस्नुहुन्थ्यो ।
यहाँ आएपछि सुरुसुरुका वर्षमा त उहाँलाई स्थिर भएर घरमै बस्न पनि गाह्रो भयो । सुरुसुरुमा वरिपरि छरछिमेकमा चिनजाका मान्छे कम हुनाले पनि उहाँलाई गाह्रो परेको थियो । तर पछिपछि भने यहाँ पनि वल्तिर पल्तिर बस्ने आफ्नो उमेर समूहका वृद्धाहरूलाई साथी बनाएर झ्याम्मिन र गफ्फिन सुरु गर्नुभएको थियो । कहिले आफै उनीहरूको घरमा पुगेर दिनभरि बस्नुहुन्थ्यो भने कहिले तिनै छिमेकीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर दिन बिताउनुहुन्थ्यो । आमालाई टिभी हेर्न, रेडियो सुन्नमा खासै रुचि थिएन । बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो, “अब बुढेसकाल लाग्यो, के गर्नी त नि; उही दुःखसुखका कुरा गर्नी, दिन कटाउँदै काल पर्खनी त हो !”
कोरोनाले टोलका धेरै मानिसलाई समात्न थाल्यो । महामारीले छोप्दै ल्याएपछि मान्छेरु घरभित्रै बस्न थालेका थिए । कसलाई यो रोग लागेको छ, कसलाई लागेको छैन; पत्तो पाइँदैनथ्यो । दिनदिनै जसो एम्बुलेन्स आएर बिरामी ओसारेको हुन्थ्यो । एम्बुलेन्स आएपछि मात्रै हामीलाई उक्त घरमा बिरामी रहेछ भन्ने पत्ता लाग्थ्यो । लक्षण देखिएका कतिपय मान्छेहरू आफ्नै घरको छततिर टहलिएका देखिन्थे । टोलका अधिकांश मानिसहरू त अझ रोग लुकाएर पनि बसेका थिए ।
अवस्था भयावह भएपछि हामीले आमालाई घरबाट बाहिर निस्कनमा बन्देज लगाएका थियौँ । “मुखमा मास्क लगाएर हिँडेपछि त केही हुन्न भो, यसरी मलाई किन थुन्न पर्यो ?” आमा हामीसँग प्रतिवाद गर्नुहुन्थ्यो र अझ थप्नुहुन्थ्यो, “तिमीहरू जति बेला पनि निस्किरहन हुने, म चाहिँ नहुने ?” घरअगाडिको बाटामा अरु मान्छेहरू हिँडेका अवस्थामा तिनीहरूलाई देखाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, “तिनीहरू पनि हिँडिरा’कै छन् त !” हामी तरकारीसरकारी वा घरमा सकिएको सामान किन्न भनेर बाध्यतावस निस्कनै पर्ने हुन्थ्यो । त्यति मात्र नभई कहिलेकाहीँ जागिरमा निस्कन पनि हामी बाध्य थियौँ । काम नगरी मुखमा माँड लाग्ने अवस्था थिएन यसर्थ बाहिर निस्कनु हाम्रो बाध्यता थियो । हाम्रो बाध्यतालाई आमाले बुझ्नुभएको थिएन वा बुझेर पनि बुझ पचाउनुभएको थियो, म यसै भन्न सक्दिन ।
हामी घरमा नभएको मौका छोपेर बेला बेलामा छिमेकीका घरमा गई गफ्फिएको थाहा पाएपछि मैले पटक पटक आमालाई राम्रोसँग सम्झाएको पनि थिएँ । बुढी मान्छेलाई चर्को बोल्दा छोराबुहारीले सहेनन् भन्ने पो पर्छ कि ! गाली गर्न त झनै भएन । निकै नरम भाषामा उहाँलाई कोरोनाको महामारी नसकिएसम्म अरुको घरमा जानुहुँदैन भनेर सल्लाहा दिएको थिएँ । चारैतिर कोरोनाको जगजगी छ, मान्छे बाँच्न र बचाउनै कठिन । आमालाई कसरी जोगाउने ? हामीलाई चिन्ता यसैमा छ ।
हामी त बरु जानेबुझे सम्मको सुरक्षा सतर्कता अपनाएर निस्कन्थ्यौँ र सकेसम्म जोगिएरै काम गथ्र्यौं । जोगिँदाजोगिँदै पनि समात्यो भने त कसको के लाग्यो र ! तर आमाले भने मास्क लगाउन पनि झ्याउ मान्नुहुन्थ्यो । “मलाई यो मास्कको टालो त गोरुको मुखाँ कोर्को झुन्ड्याएजस्तो पो लाग्न थाल्यो”, आमा भन्नुहुन्थ्यो । आमाले यसो भन्दा मैले आफू सानो छँदा आँगनमा कोदाको दाइँ हाल्दाको घटना सम्झन्थेँ– गोरुहरूले कोदो नखाऊन् भनेर हामी तिनीहरूका मुख टम्म ढाकिने गरी कोर्को बाँधिदिन्थ्यौँ र घुम्दै गर्दा तुक्र्याउन थाले भने रोकेर हत्तपत्त कोपरा थाप्थ्यौँ । अलि बढी जहानपरिवार र बल हुनेहरूका घरमा लौराले कोदो ठटाउँथे तर हाम्रो घरमा भने कोदो जतिसुकै होस्, दाइँ नै हाल्ने चलन थियो ।
आमाले मास्क मिलाएर लगाउनुहुन्नथ्यो । प्रायः नाक खुल्लै राखेर मुख मात्रै छोप्नुहुन्थ्यो । घरमा सेनिटाइजरको व्यवस्था थियो । सेनिटाइजरको प्रयोगमा पनि त्यति ध्यान दिनुहुन्नथ्यो । हामीले कराउन थालेपछि बेला बेलामा साबुनपानीले हात चाहिँ धुनुहुन्थ्यो ।
आमालाई खोप नलगाई भएको थिएन । सत्तरी वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाहरूलाई राज्यले यसभन्दा पहिल्यै खोप लगाउने काम गरिसकेको थियो । यति बेला भने मेरै आमाको उमेर समूहकालाई खोप लगाउने भनेर वडा कार्यालयले स्थानको समेत जानकारी दिई सूचना निकाल्यो । यसपटकको खोप पैँसट्ठीदेखि सत्तरी वर्षसम्मको उमेर समूहका वृद्धवृद्धाहरूलाई वडाकै स्वास्थ्य चौकीमा लगाउने भनेर सूचनामा उल्लेख थियो ।
भोलिपल्ट बिहान खाना खाएपछि साढे नौ बजेतिरै म आमालाई लिएर स्वास्थ्य चौकीतिर हिँडेँ । मेरो घरबाट स्वास्थ्य चौकी पैदल बिस मिनेटको दुरीमा थियो । अशक्त आमालाई हिँडाएर लैजाँदा मलाई लगभग पैँतालिस मिनेट लाग्यो । हामी आमाछोरा त्यस्तै सवा दस बजेतिर स्वास्थ्य चौकीमा पुग्यौँ । वैशाख–जेठको समय, गर्मी खपिनसक्नु थियो । मान्छेहरूको भिड उस्तै । वृद्धवृद्धाहरू भन्दा पनि अधबैँसे तथा युवायुवतीहरू बढी थिए । बिहानैदेखि आएर लाइन बसेका रहेछन् । लाइन निकै लामो थियो । लाइन पनि महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै । लाइनमा लक्ष्यित समूहका बुढाबुढीहरू कम र अधबैँसेहरू बढी थिए । बुढाबुढीहरूलाई चर्को घाममा उभिन गाह्रो थियो त्यसैले सायद् उनीहरूको सट्टामा छोराबुहारी वा आफन्तहरू बसिदिएका थिए । भिड नियन्त्रणमा थिएन । मानिसहरूका बिच एकापसमा निश्चित दुरी कायम भएको थिएन । त्यहाँ प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति थिएन । वडाध्यक्ष लगायत केही जनप्रतिनिधिहरूको भने उपस्थिति थियो र तिनीहरूले भिडभाड नगर्नुस्, दुरी कायम गरेर बस्नुस् पनि भनिरहेका थिए तर भिडले तिनीहरूको कुरा सुनिरहेको थिएन । भिडभन्दा केही पर बसेर मैले यी सबै दृश्य नियालिरहेको थिएँ । स्वास्थ्य चौकीको प्राङ्गण छेउमा केही शिशौका रुखहरू थिए र हामी आमाछोरा एउटा शिशौको छहारी लिएर पर्खालको आडमा बसेका थियौँ ।
वडाध्यक्ष घुम्दैफिर्दै हामी आमाछोरा बसेकै ठाउँनेर आइपुगे । मैले नमस्कार गरेर आमालाई खोपाउन आएको कुरा बताएँ । उनले आज बाँकी रहेकालाई भोलि पनि खोपाउनका लागि व्यवस्था गरिएको छ भन्ने सुनाए । भोलि भिड अलि कम हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि गरे । भोलि खोप लगाउन पाइन्छ भने आज दिनभरि यो टन्टलापुरे घाममा किन बसिरहने ? यस्तो भिडभाडमा धेरै समय बस्नु स्वास्थ्यका लागि पनि खतरा हुन्छ भन्ने लाग्यो । चार बजेसम्म मात्रै खोप लगाउने भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेका छन् । लाइनमा चार बजेसम्म बसेर पनि खोप लगाउन पाइएन भने त यस्तो खतराजन्य ठाउँमा बस्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । बरु भोलि बिहान सबेरै आउनुपर्ला भन्ने सोचेँ र आमालाई खोप नलगाई लिएर फर्केँ ।
अर्को दिन बिहान चिया मात्रै पिएर आमालाई लिई स्वास्थ्य चौकीतिर लागेँ । म आठ बजेतिर त्यहाँ पुग्दा उही हिजोको जस्तै महिला र पुरुषका छुट्टाछुट्टै दुई लाइन । लाइन निकै लामा भइसकेका रहेछन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू दस बजे मात्र त्यहाँ उपस्थित हुनेवाला थिए तर लाइनको सुरुसुरुमा बस्ने मानिसहरू बिहान छ नबज्दै आइपुगेका रहेछन् । भिड बढिसकेको रहेछ, म धेरै ढिला भएको रहेछु । लाइन नबसी सुखै थिएन । आमालाई उही हिजो बसेकै ठाउँ पर्खालको आडमा बस्न लगाएर म लाइनको अन्तिममा उभिन पुगेँ । दस बजेसम्ममा मभन्दा पछाडि पनि उत्तिकै लामो लाइन बनिसकेको थियो ।
ती केटाहरू आएपछि लाइन अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । केटाहरूले पुनः लाइन मिलाउने भन्दै आफ्ना मान्छेहरूलाई अगाडि अगाडि राख्न थाले । हामी केहीले प्रतिवाद गरेका थियौँ तर उनीहरूले हाम्रो कुरै सुनेनन् ।
सवा दस तिरबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूले खोप लगाउने कामको सुरुवात गरे । त्यहाँ टाउकामा रातो टालो बाँधेका केही केटाहरू देखिए । तिनीहरूले टाउकामा बाँधेको टालामा ‘स्वयंसेवक’ लेखिएको थियो र स्वयंसेवक लेखिएभन्दा पछाडि सेतो ताराको चिन्ह थियो । सायद् ती केटाहरू वडाध्यक्षकै पार्टीको भातृ सङ्गठनमा आबद्ध थिए ।
सुरुको डेढ घन्टा जति त सिस्टमअनुसार नै लाइनले गति लिएको थियो तर पछि पछि भने लाइन क्रमशः अव्यवस्थित हुन थाल्यो । लाइनमा अगाडि अगाडि गएर मान्छेहरू घुस्न थाले । केही मान्छेहरू पछाडिको ढोकाबाट पनि घुसेका छन् भन्ने समेत सुनियो । ती स्वयंसेवक केटाहरू नआउँदासम्म सबै ठिक थियो । ती केटाहरू आएपछि लाइन अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । केटाहरूले पुनः लाइन मिलाउने भन्दै आफ्ना मान्छेहरूलाई अगाडि अगाडि राख्न थाले । हामी केहीले प्रतिवाद गरेका थियौँ तर उनीहरूले हाम्रो कुरै सुनेनन् । लाइन बस्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन । म पुनः लाइनमा बसेँ । पहिलेभन्दा निकै पछाडि परेँ । बाह्र÷एक बजेको घाममा छाता ओढेरै उभिएँ । आज जसरी पनि आमालाई खोपाउनु थियो । भोलि वा पर्सिका लागि खोप लगाउने भनेर वडाले कुनै त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम बनाएको थिएन । वडाले दिएको समय नै हिजो र आजका लागि मात्र थियो । हिजो रित्तै फर्केको हुनाले आज पूरै समय बस्न बाध्य थिएँ म ।
आज भने त्यहाँ वडाध्यक्ष देखिएका थिएनन् । एउटा महिला र अर्का पुरुष गरी वडाका दुई सदस्यहरू थिए त्यहाँ । ती दुवै सदस्य भिडतिर नभई स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग केही समय खोप लगाउने कोठामा बसेका र पछि निस्केर हिँडेका थिए । बिहानैदेखि आएका मान्छेहरू भोकभोकै उभिएका थिए । मैले पनि खाना खाने मेसो मिलाउन सकिनँ । बिहान घरमै पिएको कप चियाका भरमा उभिइरहेँ ।
दिउँसोको दुई बज्यो । भिड उस्तै छ । पछाडि फर्केर हेर्दा लाइन पनि उत्रै देखिन्छ । मान्छे खोप लगाएर फर्केको पनि देखिन्छ तर लाइन घटेको देखिँदैन ! उभिइरहेको छु । आमालाई पनि एक बोत्तल मिनरल वाटरबाहेक केही दिएको छैन । बजारका रेडिमेड खानेकुराहरू उहाँ खानुहुन्न र म पनि लाइन छोड्दा केही गडबड हुन सक्छ भनेर बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन ।
साढे दुई बज्यो । गाइँगुइँ हल्ला चल्न थाल्यो, “भ्याक्सिन सकियो रे !”
मभन्दा अगाडिपट्टि बसेका एउटा दाइ रिसाउन थाले, “यी जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी मिलेर भ्याक्सिन लुकाएका छन् । भरे आफ्ना मान्छेलाई लगाउन भनेर यहाँ सकिएको नाटक गरेका हुन् । अहिल्यै कसरी सकिन्छ ? उमेरअनुसार पुग्दो मात्रामा आएको भन्थे ।”
उनै दाइसँग मैले जिज्ञासा राखेँ, “साँच्चै सक्किएकै होला त !” मेरो जिज्ञासाले उनको रिसको पारो अझै चढ्यो, “यी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको त विश्वासै गर्न हुन्न, यिनीहरू त भ्रष्टाचारी मात्र नभई एक नम्बरका काला व्यापारी पनि हुन् । साला दलालहरू !”
यसपछि फेरि भद्रगोल सुरु भयो । यतिका बेरसम्म चर्को घाममा भोकभोकै उभिनुपर्दा दिमाग तातेको थियो । अहिले भ्याक्सिन सकिएको कुरा सुन्दा मलाई पनि असाध्यै रिस उठ्यो । तैपनि रिसलाई काबुमा राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरूको नजिकै पुगेँ र सोधेँ, “भ्याक्सिन साँच्चै नै सकिएको हो र ?” एउटी स्वास्थ्यकर्मी महिलाकै मुखबाट मैले “सकिएकै हो” भन्ने सुनेँ ।
अब यहाँ बसिरहनुको कुनै जरुरत थिएन । यस बेलासम्म आमाछोरा दुवै भोकै । मान्छेहरू बिस्तारै फर्कन थाले । म पनि आमालाई लिएर घरतिरको बाटो लागेँ । हिजो र आज गरी दुई दिनसम्म प्रयास गर्दा पनि आमालाई खोप लगाउन सकिएन । बाटामा पुनः एउटा पानीको बोत्तल किनेँ । त्यही पानी पिउँदै हामी सुस्त सुस्त घरतिर फर्केका थियौँ । भोकले आँखा देखिएको थिएन ।
मेरा लागि अरु समयमा बिस-पच्चिस मिनेटको बाटो पनि अहिले आमाछोराका लागि एक घन्टा नै लाग्यो । म आफ्नै घरको अगाडि पुगेर गेट खोल्नै लाग्दा पछाडिपट्टि एउटा मोटरसाइकल आएर रोकियो । फर्केर हेरेँ । पल्लो घरको भाइ रहेछ । ऊ अघि भर्खरसम्म स्वास्थ्य चौकीको बाहिरपट्टि स्वयंसेवक केटाहरूसँगै देखिएको थियो ।
यो भाइको जागिर-पेसा केही थिएन र पढाइ पनि थिएन । एक किसिमले भन्ने हो भने ऊ हल्लन्दास नै थियो । बाबुले ठेक्कापट्टा गरेर राम्रो कमाइ गर्ने हुनाले उसको आर्थिक हैसियत छरछिमेकका अन्य केटाहरूको तुलनामा माथि नै थियो । मोटरसाइकलको इन्जिन बन्द गरेर निकै गर्वका साथ बोल्यो, “मैले त खोप लगाएर आएँ नि अङ्कल !”
अचम्म मान्दै मैले सोधेँ, “कसरी खोपाउन पायौ त नि तिमीले ?”
हाँस्दै जबाफ फर्कायो, “सोझो औँलाले घिउ आउँदैन के अङ्कल !”
“तिमी त चालिस वर्ष पनि पुगेका छैनौ होला ! कसरी पुर्यायौ त नि पैँसट्ठी-सत्तरी वर्षको उमेर ?” मैले जिज्ञासा तेर्स्याएँ । मेरो प्रश्न सुनेर ऊ खित्कै छोडेर हाँस्यो ।
मैले पुनः आश्चर्यका साथ फेरि पनि जिज्ञासा तेर्स्याएँ, “तिमी कर्मचारी पनि त होइनौ !”
उसले निकै गर्वका साथ भन्यो, “यो सबै वडाध्यक्षज्यूको करामत हो के अङ्कल ! उमेर पनि उहाँले नै मिलाइदिनु भएको ।”
- २३ श्रावण २०७८, शनिबार १३:११ मा प्रकाशित